Uganda oo Qorshenaysa inay Somalia iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kala baxdo Ciidankeeda |
Uganda (NN) 06/05/2016
Afhayeenka Millateriga Uganda, Col. Paddy Ankunda ayaa sheegay in Guddi gaar ah loo saaray arrintaan si ay talooyin uga soo bixiyaan. Balse ma jirto faahfaahin intaa ka badan oo uu bixiyay.
Ma ahan markii ugu horreysay oo Uganda ay dib u eegis ku sameyso hawl-gallada ay ciidamadeedu u joogaan Somalia iyo waddamo kale oo Afrikaan ah, balse waa markii ugu horreysay oo ay ka hadasho inay ciidamadeeda la baxasyo.
Sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Uganda ayaa BBC u sheegay in Yoweri Museveni uu qorsheynayo inuu soo gaba-gabeeyo labadaas hawl-gal ee Somalia iyo Jamhuuriyadda Afrika Dhexe oo ciidammada ugu badan ee Jooga ay Uganda kasoo jeedaan.
Ugu dambeyn, Uganda ayaa waxay ahayd dalkii ugu horreeyay oo ciidammo nabad-ilaalin ah u soo dira Somalia, ayaa waxay ciidamada ka jooga hadda gaarayaan illaa 6,000 oo Askari, waana ciidamada ugu badan ee AMISOM.